Myanmar Defence Weapons: စစ်ဘက်သုံး စစ်ခွေးများအကြောင်း
Tun Tun Ko August 29, 2012 at 2:26 AM
When I'm in services till 1988, there isamilitary dog training school in Maymyo. All units around the country have to chooseadog andamaster to attend the course.After they have finished the course, the dog received the serial Nos and ration then send them for action to the front lines.It may be happen until now.
Tun Tun Ko August 29, 2012 at 8:22 PM
When I'm in services till 1988, there isaMilitary dogs training school in Maymyo.The units around the country have to choose the dogs and masters and send them to the school for the course. After they have finished the course, the dogs received the serial numbers and ration then go for action to front lines, may be now also the same.
Phyoe Hein Thwin August 31, 2012 at 4:07 AM
ကျွန်တော်က အရပ်သားတစ်ယောက်ပါ ဒါပေမယ့် အဖေကတပ်မတော်သား ဖြစ်တဲ့အတွက် တပ်မတော်သားတွေကို လေးစားမိပါတယ်။ 29.8.12 တုန်းက ဖားကန့် မှာ အစိုးရတပ်က လူ ၄၈ဦး ကျဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းကြားမိတော့ ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်။မိပါတယ်။ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကို သိချင်ပါတယ် သုံးသပ်ချက်ရောပေါ့။ မြန်မာ့တပ်မတော်အနေနဲ့ ပေါ့ဆတာလို့ ဆိုနိုင်ပါသလား မသိလို့ မေးတာပါ။ ရန်သူ့ နယ်မြေလို ဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာ ဂရုတစိုက် မချီတက်သင့်ဘူးလား။ အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုတွေပဲ လိုအပ်နေလို့ လား။ သိချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်လို ဘာမှနားမလည်တဲ့ လူငယ်အရပ်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောရင်တော့ အခုလိုပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်မှာ တပ်မတော်အနေနဲ့ ရဲရဲတက် ရဲရဲတိုက် ရဲရဲခြေမှုန်းအစား စနစ်တကျတက် စနစ်တကျတိုက် စနစ်ကျခြေမှုန်း လို့ ပြောင်း
sanaythar August 31, 2012 at 9:41 PM
အောင်မယ်လေး . ကောင်းလိုက်တဲ့ ကော့မန့်ဗျား။ ပြောချင်နေတာကြာပြီ။ ဘယ်သူမှမစလို့၊ ကိုဖြိုးဟိန်းသွင်ကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ ကို mm ကိုအားနာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုmmချမှတ်ထားတဲ့မူဘောင်ထဲမှာပဲ ဆွေးနွေးကြမှာပါ။ ဒီတိုက်ပွဲ ဘာကြောင့်တိုက်တယ်၊ သင့်တယ် မသင့်ဘူး၊ မဆွေးနွေးဘူးဗျာ၊ မှန်တယ်၊ မမှန်ဘူး၊ မဆွေးနွေးဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်မီတိုးတက်စေချင်တဲ့၊ စစ်လက်နက်တွေအကြောင်း ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တပ်မတော်ကြီးဟာ အခုစစ်မြေပြင်မှာ တိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်။ ရန်သူများစွာ(ဦးတည်ရန်သူမဟုတ်၊ အချိန်ပိုင်းရန်သူ)ရှိနေတယ်။ သတင်းမခိုင်လုံသေးတာကြောင့် စောင့်နေရတယ်။ ဒါပေမယ့်အရမ်းသိချင်တယ်။ ဘယ်လိုတိုက်သလဲ၊ ဘယ်လောက်အင်အားလဲ၊ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးသလဲ အရမ်းသိချင်ပါတယ်။ ဒါကျွန်တော်တို့ တစ်ကယ်ဖြစ်နေတဲ့ စစ်မြေပြင်ပဲ၊ ဒီအပေါ်မှာ Tactic ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြရအောင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့လို စိတ်ဝင်စားသူများအဖို့ အစ်ကိုများရဲ့ တန်ဖိုးရှိလှသော ဆွေးနွေးချက်များကို ကျွန်တော်တို့ သိလိုပါတယ်။ အခုတပ်မတော်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရသူများကို ကျွန်တော်တို့အားလုံးမမုန်းကြပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော် ဘယ်ပုံစံနဲ့ စစ်တိုက်နေတာလည်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသင့်တယ်။ ကို MM။ ကျွန်တော့် Comment မသင့်ဘူးထင်ရင် ဖြုတ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
jedi August 31, 2012 at 11:23 PM
စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာ ပန်းနဲ့ပေါက်နေတာမှမဟုတ်တာ တချက်မှားရင်အသက်ပေးရတာပဲလေ ကျဆုံးသွားသောရဲဘော်များ ကောင်ရာသုဂတိလားပါစေ
Ko Phyo September 1, 2012 at 8:09 PM
စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာပန်းနဲ့ပေါက်တာ မဟုတ်လို့ကျဆုံးမှုဆိုတာရှိမယ် ဆိုတာမှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တကြိမ်အမှားကို ပြန်ပြီးသင်ခန်းစာယူသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ သတင်းပေါက်ကြားလို့ထင်တာပဲ။ ပဒေသာမိုင်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး ထောင်ထားမယ်မထင်ဘူး လာနေမှန်းသိလို့ ကို လာထောင်သွားတာ။ အရပ်သားတစ်ယောက်ရဲ့အမြင်ပါ။ ကျွန်တော်ဒီ blog ကို စဖတ်ဖြစ်တာမကြာသေးတော့ ကို MM ရဲ့ စည်းကမ်းတွေ သိပ်မသိဘူး ဒါကြောင့် အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဖျက်ချင်လည်းဖျက်ပါ။ ဆက်ပြောမယ်နော်၊ အခုကိစ္စ အပြင် ဖားကန့် က company တစ်ခုကို KIA ကဝင်စီးပြီး မိုင်းထောင်သွားတာ ။ တပ်မတော်က သေနတ်သံကြားလို့ ဝင်လာတော့ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး ကျသွားသေးတယ် လို့ သတင်းတစ်ပု ဒ်မှာ ဖတ်မိပါတယ် တကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိပါဘူး။ ဒီနေရာမှာလည်း တပ်မတော်အနေနဲ့ သင်ခန်းစာယူသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်
Tun Tun Ko September 2, 2012 at 9:10 PM
KMM ရေ စနေသားရဲ့ comment လေးတွေ့လို့နဲနဲဝင်ရှာရှည်ပါရစေ။ ဖားကန့်မှာ အရာရှိ (၆ )ယောက်အပါအ၀င် စစ်သည်(၄၈)ယောက်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။နဲနဲနောနောမှ မဟုတ်တာ၊ တို့တုန်းကဆိုရင် တပ်ခွဲတစ်ခွဲစာနီးပါးဘဲ။ အခုဆိုရင်တပ်ရင်းတစ်ရင်းနီးပါးလို့ဆို ရလောက်တယ်။ ပွိုင့် ၆၀၄၁ မှာ ဗကပ လူ ၁၂၀၀ လောက်ကို ၈ရက်၉ရက်လောက်ခံတိုက်ပြီးမှ ကျတဲ့အရေအတွက်လောက်ဖြစ်နေတယ်။ ကြူကုတ်တို့၊ချူးရွှေပန်ကောက်တို့၊စီစီဝန်တာပန် တို့မှာ ရက်ပေါင်းလပေါင်းများစွာကြာမှကျခဲ့ရတဲ့အရေအတွက်ဘဲ။တပ်မတော်မှာအရေအတွက်မှအရေအချင်းသို့ ဆိုတဲ့စကားခေတ်စားခဲ့ဘူးပါတယ် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ၊ ခေတ်ပြောင်းသွားလို့လား၊ တကယ်ကောဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင်သံသယ၀င်မိပါတယ်။Propaganda ဆိုတာကလဲရှိတာကိုး၊ တို့တုန်းကတပ်မတော်မှာ ခြေလျင်တပ်ရင်း၁၂၆ရင်းဘဲရှိတယ်၊ဒီတပ်တွေနဲ့ဘဲအရှေ့မြောက် BCP အမည်ခံတရုပ်တပ်တွေကော၊ငပွေးတွေကော၊ပြည်တွင်းရိုးမမှာရှိတဲ့ ဗကပ တွေကိုကော၊ ဘိန်းစစ် တပ်တွေကော၊ KIA ကိုကောတုပ်တုပ်မှမလှုပ်နိုင်အောင် တိုက်ထားခဲ့တာ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်KIA ကိုသိပ်ပြီးတောင်ထဲ့တွက်တာမဟုတ်ဘူး၊တပ်ထဲမှာသစ္စာအင်မတန်ရှိတိုက်ရည်ခိုက်ရည်အလွန်ကောင်းသတ္တိ သိပ်ရှိတဲ့ ကချင်စစ်သားကြီးတွေအများကြီး၊ ကချင်(၄)ဆိုတာတပ်မတော်မှာတကယ့် တပ်မာ တစ်တပ်ဘဲကချင်တွေချည်းဘဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အခုတော့ အဲ့ဒီလိုရန်သူကို ခြေလျင် တပ်ရင်းရာဂဏန်း၊ ကျန်တဲ့လက်ရုံးတပ်တပုံတပင်နဲ့တိုက်နေရပြီးတန်ဘိုးအနဂ္ဃထိုက်တန်လှတဲ့ ငါတို့ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်ရာဂဏန်းထောင်ဂဏန်းပေးနေရတယ် ဆိုတာရင်နာတယ်ကွာ၊ ဘာလဲ အရည်အချင်းမှအရည်အတွက်ဖြစ်သွားပြီလား။
Soeminn Htet September 3, 2013 at 1:56 AM
စစ်ခွေး အကြောင်း က ပြောကြည့်ဦး မယ် ဗျာ..၁၉၉၄ ခုနှစ်လောက် အထိ ကို ...မပခ ခွင် ပြည်ထောင်ရွာ မှာ တိုင်းဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း အမှတ် (၇) ရှိပါတယ်.. အဲဒီ မှာ ခွေးသင်တန်း ပါတယ်.. ဆရာ အဆင့် တွေ တက်ရတာ ပါ..တပ်ရင်းတွေ က ရွေး ပြီး အရွေး ခံ ရတဲ့ သူ က ကိုယ့်ခွေး ကိုယ်ရှာ စနစ် နဲ့သွား တက်ရပါတယ်..
မြန်မာပြည်က ခွေး လေ သိတယ် မဟုတ် လား..စစ်သည်တွေ က တွေ့ ကရာ ခွေး လေခွေးလွင့် တွေ ခေါ်သွား ..သင်တန်း မှာ ခွေး အချင်းချင်း ကိုက်..ခွေးထွက်ပြေး ခွေးပျောက်...သင်တန်း သား က ဖက်ထိပ် လုပ်...အင်း ပြောရရင် တော့ သင်တန်း မအောင်မြင် ပါဘူး...ခဏ နဲ့ နောက် ပိုင်း ခေါ်တာ မကြား တော့ ဘူး...ဟိုတစ် လော ကဖေ့စ်ဘွတ် မှာ မြန်မာ စစ်ခွေး လေ့ကျင့် နေတာ ကြည့် လိုက် ရတယ်...ခွေး ငါးကောင် လောက် ဖြစ် မယ်...ကျွန်တော် အမြင် ဖေါ်ရှိုး တွေ ဖြစ် နေသလား လို့ ပါ...
တကယ် လုပ်ရင် ခွေး တွေ က စစ်သည် တွေအတွက် အလွန် အသုံးတည့် တန်ဘိုး ရှိလှပါတယ်...
ခွေး မွေး ထား တဲ့ စခန်း တော်ရုံ နဲ့ အလစ်အငိုက် ၀င်ကပ် လို့ မရတာ သိကြမှာ ပါ...
အ၇ည်အချင်း ကိစ္စ ကတော့ ပြောရရင် တကယ့် ကို အရည်ချင်း မှ သည် အရေအတွက် ဆီသို့ ဖြစ်နေပါပြီ...အဲဒါ က တကယ် ပါ...စစ်သည်ပေါက်စ တွေ အရာရှိ ပေါက်စ တွေ ပညာ မပြည့်ဝ ကြပါဘူး..
ကို ထွန်းထွန်းကို တို့ ခောတ် က.. တကယ်ကို ပြည့်ဝ ခဲ့တာ လက်ခံပါတယ်..ဒါပေမယ့် အဲဒီနောက် လက်ဆင့်ကမ်း ဆယ်စုနှစ် သုံးခု လောက် မပြည့် ၀ လိုက် တာအခု ..လို ဆုံရှုံး မှု က သက်သေ ပါဘဲ..သင်တန်း တွေ မှာ ပညာ သင် တာ ထက် ဖက်ထိပ် ဦးစား ပေး ခိုင်း နေတာ အဆိုးဆုံး ဖြစ်စဉ်ပါ..ရှေ့တန်း မှာ စစ်သည် ကို တပ်ရင်းမှူး က ပြန်ချော့ နေရတဲ့ ခောတ် ပါ..စစ်သည် က တောတွင်း ရှေ့တန်း မှာ စီကျူ က သူ့ ကို အိမ်သာ ဆောက် မပေး လို့ သူ သွား ချင် ရာ သွား ပါ သတဲ့...ရင်းမှူး ခင်မျာ ရယ်၇မလို ငိုရမလို နဲ့ တွေးသာ ကြည့် ပေါ့ ဗျာ...အရာရှိ အဆင့် တွေ ကို သင်တန်း မှာ စံ နဲ့ မောင်း ထား ပေမယ့်...အောက်ခြေ တပ် ကိုယ်ထည် က ဗရမ်းဗတာ ဖြစ် နေရင်..ဒီဘက် ခောတ် အရာရှိ တွေ ..နိုင်ငံတော် အပေါ် ကို စစ်မှုထမ်းသက် အကြွေး ပြန်တင် မယ့် ကိန်း ပါ...ခင်ဗျာ... လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ် တွေ ထောက်ပံ့ မှု တွေ ပြန်လည် ဆန်းစစ် သင့်ပါ ကြောင်း ခင်ဗျာ...